ISUMI NGENQAKU ELIQINISEKILEYO: LIYALELWA NJANI?
Ukuba unengxaki ekusombululeni i Isixa esinenqaku lokugqibelaNamhlanje siza kukuxelela indlela yokwenza ngendlela elula, ngaphandle kwengxaki enkulu kunye neenkqubo ezilula; qhubeka kwaye ungaphoswa leli nqaku.
1 Ukudibanisa nenqaku lokugqibela
4 Kwiinkqubo zekhompyuter
Ukudibanisa nenqaku lokugqibela
La ukudibanisa nokuthabatha ngenqaku lokugqibela yenye yemisebenzi yemathematika apho abanye abafundi beveza iingxaki kwaye babambeka; Oku kukhokelela ekuchitheni iiyure ezimbalwa ukuzama ukuqonda indlela yokusombulula ezi ngxaki. Indlela ezisonjululwa ngayo yinxalenye ebalulekileyo kuphuhliso lolwazi kunye nokusetyenziswa kweenkqubo, kumaziko emfundo ahlukeneyo, ngakumbi kwizifundo ezinjengezibalo.
Ezi iingxaki ze Isixa esinenqaku lokugqibelaKufuneka zaziwe kakuhle, umbono kukuba zisebenza njengesiseko sokusombulula iingxaki kwezinye izifundo nakwimimandla yesayensi; Ukuba injongo yakho kukufunda ubuchwephesha obunxulumene nefiziksi, ubunjineli, uyilo okanye nayiphi enye into enxulumene namanani, sicebisa ukuba ungaphoswa lithuba lokufunda Ukongeza kunye nokuthabatha umthambo kunye nenqaku lokugqibela
Eminye imisebenzi ilula, ingumbandela wokujonga kakuhle into nganye kunye necandelo lamanani, nokwazi ukuba indawo okanye ikoma ikuphi ngokubhekisele kwenye. Kubalulekile ukuba wazi ukuba amanani iidesimali Batyekele ekudidekiseni abafundi abaninzi, ke kuyacetyiswa ukuba bajonge xa ​​kusonjululwa imisebenzi.
Bhala amanani edesimali enye ngezantsi kwenye kunye namanqaku edesimali alungelelanisiweyo; emva koko yongeza oonothi kwiindawo ezingekhoyo ngoko ke zilingana ngobude. Qala ukongeza ngesiqhelo kwaye ukhumbule kwakhona, susa inqaku lokuya kwisiphumo, masibone umzekelo:
Sinenombolo 5, 872 kwaye sizakudibanisa nenombolo 9,2, emva koko siqhubeke nokulungelelanisa amanani asekwe kwikoma
Njengoko sibona, amanani abekwa ukugcina inqaku okanye indawo yedesimali emgceni, yeyona ndlela yesiko yokwenza lo msebenzi: ngokuthabatha okanye ngokuthabatha umsebenzi wenziwa ngendlela efanayo; indawo yedesimali kunye namaxabiso kufuneka axhonywe ukuba akukho zeros zongezelelweyo.
Xa sisenza udibaniso nenqaku lokugqibela, asixazululi ingxaki yemathematika kuphela ngenkqubo elula, sithathela ingqalelo umahluko owenza into ekuthiwa yeyokugqibela. Olu luphawu olusebenza njengereferensi lokwahlula inani elipheleleyo kunye nenxalenye yecandelo lenani.
Namhlanje olu phawu okanye inani lokugqibela lokugqibela lihlala lisetyenziswa ngekoma kwaye namhlanje kwezinye iinkqubo kunye nezixhobo zokubala ngokusebenzisa inqaku. Isebenze ukubonakalisa amaxabiso kwiindawo ezininzi ezikhethekileyo kunye neendawo zobungcali zobomi babantu.
Inqaku lokugqibela kangangexesha elithile lalineengxaki ezininzi, kwakhankanywa okokuqala ngo-1492 xa ingcali yezibalo yacebisa ukuba isetyenziswe ukuze yahlule amanani abonisa amaxabiso angachanekanga. Ixesha elingaphezulu, ukusetyenziswa kwayo kuye kwaxhaphaka kwaye kwathathelwa ingqalelo njengophawu olubalulekileyo, kuba ukuba ibingabekwanga, amanani anokutshintsha.
Phambi konyaka ka-2003, imisebenzi enophawu lokugqibela kwakufuneka ibekwe kuphela ngekoma, emva kwaloo nyaka kwagqitywa ukuba akunamsebenzi ukubeka ikoma okanye ixesha lokwahlula amanani edesimali. Nangona kunjalo, uninzi lweenkqubo zekhompyuter kunye nezixhobo zicwangcisiwe kubalo lwabo lokujonga kuphela ikoma njengomahluli wokugqibela.
Izixhobo eziye zenziwa emva konyaka ka-2005, ziye zakwazi ukuhlaziya amanani azo kunye namanani anendawo yedesimali afunyenweyo, oko kukuthi, ukwahlula kubonakaliswa kwizikrini zokubala ngamanqaku kwaye ikoma yeyamanani amancinci.
Iinkqubo ezininzi okanye isoftware isebenza ngokudibanisa isebenzisa amanqaku edesimali xa kusetyenzwa ngokwamanani. Ngesi sizathu sifumana ezinye ezifana ne-Excel, emisela ukusebenza kwezibalo ngokusisiseko ngokubeka amanani ngamaxesha kunye neekoma.
Ezinye iinkqubo zisazithembile ngokwahlukana ngokusebenzisa ikoma, ukuze xa idatha idluliswa okanye isuswa kwenye inkqubo isiya kwenye, iboleka ukudideka okukhulu, kulapho abasebenzisi kufuneka babenolwazi, bavote ukuba baxube idatha phakathi kwekoma kunye nexesha.
Umsebenzi wokongeza kunye nenqaku lokugqibela unikezela ngeenzuzo ezininzi, ngaphandle kokwandisa amandla okusombulula iingxaki kunye nembono yokujonga la manani, isebenza ukukhawulezisa iinkqubo zengqondo ezivumela ukuphucula iimpendulo kwiinkqubo ezinzima, nangona kunjalo, phakathi kwezinye izibonelelo esinazo:
Amanani okwenyani ayafunyanwa apho ukujikeleza kamva kunokusetyenziswa, ngokweemfuno.
Banikezela ngezinye iindlela kwiziphumo zokumisela amaxabiso awodwa ngaphandle kwenkcazo enezigubungelo.
Bayasivumela ukuba siqwalasele amakhonkco ngokuthe ngqo kwamanye amanani, amaxabiso abo kwaye zeziphi ezimele ukungathathi cala ngexesha lokongezwa.
Siyabona ukuba ukudityaniswa kwenqaku ledesimali kukwabonelela ngezinye izinto ezingalunganga ezinokuthi zinciphise isenzo ukuba inkqubo iyenziwa. Kwangokunjalo, banomda kwinkqubo eguqukayo, yokulibazisa eminye imisebenzi ngelixa belinde inkcazo yesixa.
Inani lamanani likhulu kwaye linzima ngakumbi xa kuthelekiswa nokusebenza kokongezwa kwamanye amanani.
Imisebenzi ayisebenzi kakhulu kwaye ngetekhnoloji yangoku kulula ukuba uyisombulule usebenzisa isixhobo esiphathwayo okanye isixhobo sokubala.
Ukuba nesantya esingakumbi kunye nokuxhamla ukongeza kwimisebenzi enenqaku lokugqibela, yenza imithambo emininzi apho amaxabiso amakhulu ahambelana namaxabiso asezantsi; Oko kukuthi, sebenzisa amanani afana ne-78563,8877 kwaye ubadibanise ngamanani amancinci afana no-0,34898776. Emva kwethutyana ndingabona ukuba amandla okusombulula le misebenzi ayanda.
Nangona kunjalo, siyazi ukuba ngokuza kwetekhnoloji, kulula kakhulu ukufumana ezi zibalo; Nangona kunjalo, olu hlobo lokuzilolonga luvumela abantu abatsha ukuba benze amandla okusebenza; eya kukunceda ukuphucula ukugcinwa kunye neendlela ekujongeni ukusombulula iingxaki.
Ukuba ulithandile eli nqaku, siyakumema ukuba undwendwele ibhlog yethu ngale linki Funda ukongeza amanani angaphezu kwamabini, apho unokufumana amanye amanqaku anomdla.